Myanmar Defence Weapons: မြန်မာ့တပ်မတော်ထုတ် ခေတ်မှီသံချပ်ကာယာဉ်များအကြောင်း
Falcon January 23, 2014 at 1:39 AM
Keep Going! Something is better than nothing. Believe that we will support our Myanmar Army All the time. We also hope to see them during the Parade on coming March 27th. Anyhow, keep hiding latest, secret weapons and invention. Let them know only what we want them know. We are always proud of beingaMyanmar Citizen. Cheers!
joseph January 23, 2014 at 3:37 AM
By manufacturing our-self, it saves money and we can spend more money in research and new projects. Cheers.
sai hein January 23, 2014 at 4:57 AM
ထရပ်ကားကြီးတွေကို ထုတ်နိုင်နေပြီလားဗျ ကိုအမ်အမ်.......ULARV3 ကို ကြိုက်တယ်ဗျာ..ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော့ ပြောစရာကို မလိုတာ...မိုက်တယ်
Myo Thant January 23, 2014 at 5:48 PM
ခေတ်မီတိုးတက်သော ပြည်သူ့အတွက်တပ်မတော်ကြီး ဖြစ်ပါစေဗျာ ။
kyawzin lat January 23, 2014 at 5:57 PM
zaw linn January 23, 2014 at 6:37 PM
မြန်မာ့တပ်မတော်အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ။ ကိုယ်စွမ်း ဥာဏ်စွမ်းစိုက်ထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် တပ်မတော်သားတွေကို ထိုက်တန်သော ချီးမြှင့်ခြင်းမျိုး ပေးအပ်သင့်တယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ အမျိုး၊ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် အနာဂါတ်မှာ long range missile များ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါစေ။
ko min January 23, 2014 at 9:02 PM
နောက်ကြည့်မှန်တွေကသဘာဝမကျသေးဘူးဗျာ camera လေးတွေတပ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်
roger nge January 24, 2014 at 3:28 AM
zawmin htike January 24, 2014 at 11:45 PM
I'm really proud for this development.
Kyaw Thu Htwe January 27, 2014 at 1:58 AM
zaw linn January 29, 2014 at 6:55 AM
ဘ က Russian Yak-130 Combat Training Jets ၂၄ စီးဝယ်ထားတယ်ဗျ။ $800M ဖိုးရှိတယ်။ မြန်မာရေတပ် Submarine ပိုင်လားဆိုတာ အဲဒီ web page မှာ ဖတ်နိုင်တယ်။ ၂၉ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့။ http://asian-defence-news.blogspot.com မှာပါ။ Su-30 လောက်မှ မ၀ယ်ရင် သေပြီဆရာလို့ ပြောရမှာပဲ။ တယုတ်ထုတ်ဆိုရင်တော့ သံရည်ကျိုစက်ရုံကို မကြာခင် ပို့စရာတွေရှိသေးတယ်ဆိုပြီး ဘွတ်ကင်လုပ်တာထားတော့။ ကိုmm ရေ အဲဒါတွေကို ဘာသာပြန်ရေးပေးပါလား။
2400thaque January 31, 2014 at 7:15 AM
Very good achievement by MA indeed. But the problem is these vehicles seems to have very weak Armour. No offense , but these vehicles can be taken out with 50 cal rifles, just one well placed shot in the engine chamber.
Also, recently, BAF has ordered9K9 W trainers from China to complement these YAK130 trainers.
GunnyGun December 2, 2014 at 2:50 AM
Who has made design of ULARV-1? It is similar to Ukrainian Dozor-B